Aabaha Boris Johnson oo bilaabay qaabka codsashada baasaboorka Faransiiska si uu u sii wado… – Hagaag.com
Posted on 23 Maarso 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Wargeyska The Independent ayaa ka soo weriyey gabar la dhalatay Rai’isul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo sheegtay in aabahood, Stanley Johnson, uu bilaabay sanadkii hore qaabka codsashada baasaboorka Faransiiska si uu u sii wado xiriirkiisa Midowga Yurub.
Rachel Johnson ayaa sidaasi waxay ku sharraxday buug cusub in aabbaheed, xubin hore ka ahaa baarlamaanka Yurub oo si xoog leh u taageera xubinimada Britain ee Midowga Yurub, kaasoo u codeeyay ka soo horjeedka waddankiisa ka-bixitaanka aftida Brexit, wuxuu codsaday jinsiyadda Faransiiska sababta oo ah hooyadiis Irene waxay ku dhalatay magaalada Versailles, ee France.
Rachel waxay sheegtay in aabbaheed uu ku sii socdo jidka sidii uu ku noqon lahaa muwaadin Faransiis ah, halkaasoo hooyadiis ku dhalatay Versailles, ayeeydiisana ay ku sugan tahay Paris, waxay sheegtay in ay u riyaaqday warkan oo ku tilmaantay war wanaagsan, waxay kaloo sheegtay inay suuragal tahay in iyaduna sidoo kale ay noqoto Faransiis.
Wargeysku wuxuu soo wariyey in ilo ku dhow qoyska ay u sheegeen wargayska Sunday Times in Johnson aabaha uu dalbaday si carruurtiisa caruurtooda uga sii noolaan karaan ugana shaqeeystaan Midowga Yurub kadib markii Britain ay ka baxdo.
Waxaa la xusaa in Qoyska Rai’isul Wasaaraha Ingiriiska lagu yaqaanay inay ku kala qeybsanaayeen Brexit, in kasta oo Boris uu ahaa udub dhexaadka in Boqortooyada laga saaro Midowga Yurub.
Walaashiis Rachel ayaa waxay ku biirtay xisbiga Liberal Democrats ka hor doorashooyinkii 2017, ka dib markay dhalleeceeysay taageerada Conservative ee Brexit.
Johnson Sr., oo sidoo kale xubin ka ahaa baarlamaankii muxaafidka ee Ingiriiska horaantii 1980dii, ayaa olole u galay ka sii mid ahaanshaha inta lagu gudajiray aftida Brexit.